Poolisii Matammaa Yohaannis: Konkolaattonni Matammaatti qabaman qoratamaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Poolisii Matammaa Yohaannis: Konkolaattonni Matammaatti qabaman qoratamaa jiru
Konkolaattota fe'umsaa kan Raayyaa Ittisa Biyyaati jedhaman- gara Sudaan ce'aa wayita jiran dhaabsifaman irratti qorannoo gaggeessaa akka jiru poolisiin BBCtti himeera.
Konkolaattonni qabeenyaa Raayyaa Ittisa Biyyaati jedhaman shan magaalaa Daangaa kan taate Matammaa Yohaanisitti, daangaa wayita ce'uuf jedhan dhaabsifamuun isaanii dubbii ijoo taheera.
Taateen kunis kaleessa -Dilbata sa'aa sagal booda kan raawwate wayita tahu, jiraattonni magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan, konkolaattota shanan kanneen akka daangaa qaxxaamuranii hin dabarreef danqaniiru.
Odeeffannoo fi suuraleen naannichaa bahan akka mullisanitti, konkolaattonni fee'umsa fe'an, namoota hedduun marfamanii mullatu. Anga'oonni naannichaas seera-qabeessummaa fee'umsa kanaarratti qorannoo gaggeessaa akka jiranis hubachuun danda'ameera.
Poolisiin Matammaa Yohaanis irraa Saajin Indaalkaachoo Tasammaa BBCtti akka himanitti, konkolaattonni fee'umsaa shanan kunneen, Dilbata sa'aa booda gara Sudaanitti ce'uuf wayita yaalanitti, hojjettoota Imigireeshiniin paaspoortii gaafataman.
Konkolaachistoonni kunniin paaspoortii gaafataman agarsiisuu hin dandeenye.
''Kanuma hordofee waldhabdeen uumamuufi jiraattonni naannichaas shakkii konkolaataan kun seeraan ala dabarsaa jira jedhuun ugguraniiru. To'annaa poolisii jalas akkaoolu godhaniiru,'' jedhan Saajin Indaalkaachoo.
Poolisiin haala jiraattonni ibsaniin bakkicha argamuun waan jedhamu arguu baatus, ''Shakkiin biraa ammoo taargaan isaanii dhoqqeen dibamee golgameera kan jedhu ture,'' jedhaniiru Saajin Indaalkaachoo.
Qondaalli poolisii kun dabaluun, wayita ammaas konkolaattonni shanan to'annoo poolisii jala ooluun, annga'oonni naannichaa raayyaa ittisa biyyaa-RIB waliin tahuun qulqulleeffamaa jiraachuu dubbatu.
Kanumaanis konkolaattonni kunneen meeshaalee waraanaa fe'uusaanii mirkaneessineerra jedhu.
Konkolaattonni kunniin loltoota raayyaa ittisa biyyaan eegamaa akka turan himamus, haga ammaa odeeffannoo guutuu akka hinqabne nutti himaniiru.
Dubbii kana hordofee saamichi raawwatameeras jedhamee hasawamaa tureera. Kanaafis deebii wayita kennan ''Taatee kanaan rakkoon nageenyaas tahe, saamichi hin mudanne,'' jechuunis BBCf mirkaneessaniiru.
''Dhimma kanarratti aangawoota RIB olaanoorraa wanti dhageenye hin jiru. Raayyaan naannoo kana jirus wanti beeku akka hinjirre nutti himeera,'' jedhaniiru Saajin Indaalkaachoo Tasammaa.
Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf Itti Gaafatamaa Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalaa Matammaa Yohaannis ka tahan Inispeektar Yinnaagar bira bilbillus, odeeffannoodhuma walfakkaataan qaba jedhaniiru.
Konkolaattonni kun bakka tokkotti eegumsi godhamaafi akka jiruufi aanga'oonni naannoofi godinaa qulqulleessuuf gara iddichatti imaluus nutti himaniiru.
Konkolaattonni kunniin seera-qabeessa tahuusaanif xalayaa qabaachuu dubbatanis, seeraqabeessummaa xalayichaa haga yoonaa mirkaneessuun akka hin danda'amne dubbatu aanga'aan kun.
Aanga'oonni naannichaa BBCn haasofsiise taate kana hordofee rakkoon nageenyaas tahe, kan geejjibaa akka hin uumamne mirkaneessaniiru. Sochiin Sudaanii - Matammaa Yohaanisitti, akkasumas Matammaa Yohaannisii - Sudaan Galaabaat akkuma itti fufetti jira jedhaniiru.
Odeeffannoo kanarratti odeeffannoo argachuuf yaaliin Raayyaa Ittisa Biyyaa bilbilaan argachuuf taasfine hin milkoofne.
Jen. Birhaanuu Julaa: Raayyaan Ittisa biyyaa ummata tiksa malee hin dararu
Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa afur ajjechaa misirroo Booranatti raawwateen shakkaman to’ataman
Nama farra summii barbaacha yeroo 200 ol bofaan hiddame
Inistaagiraam beeksisa waa'ee ulfaatina hir'isuu dhorke